Zvikoro Zvodzinga Vana Vasina Kubhadhara Mari Zvoshungurudza Vabereki Vakawanda
Vabereki vakawanda vari kuchema chema kuti zvimwe zvikoro zviri kudzinga vana kuchikoro vasina kubhadhara mari yechikoro yakakwana iyo yakawedzerwa zvikuru kotoro ino, kunyange mutemo wehurumende uchiti vana vasina kubhadara havafani kudzingwa.
Zvikoro zvizhinji muMasvingo zvinosanganisira , Runyararo, Vurombo neFrancis Aphiri Primary, Christain neMucheke Secondary zvadzinga vana vasina kubhadhara mari muzuva rechipiri rekuvhurwa kwezvikoro.
Izvi zviri kukunganisa vana vanofanira kunyora bvunzo vakavhura svondo rino nekuti vakarasikirwa nenguva yekudzidza yakawanda mulockdown.
Vabereki vazhinji vataura neStudio 7 vachema chema kuti havana kupihwa nguva yakakwana kugadzirira kuvhurwa kwezvikoro nekudaro vange vasina mari. Vanoti vakuru vezvikoro havasi kuvanzwisisa padambudziko remari iri.
Mumwe mubereki. Amai Sungano Zvarebwanashe, vanoti zvikoro zvinofanira kuvapa mukana wekutsvaga mari sezvo kotoro iyi yakavhurwa vasina kugadzirira, ////Act-1-Zvare-
Izvi zvatsinhirwa neumwe mubereki wekuRunyararo West, Amai Beatrice Hamadziripi, vane mwana adzingwa chikoro nhasi .
Vamwe vabereki vakaita savaAndrew Maforo, vane mwana adzingwawo chikoro ari fomu 4,vanoti vana vanogona kufoira bvunzo dzekupera kwegore sezvo vari kudzingwa apo vasina kudzidza mwedzi yakawanda yadarika iyi.
VaMaforo vanoti chimwe chiri kuvatadzisa kubhadhara ndechekuti zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari nezvikamu zvinosvika zana kunyange hurumende yange yakati zvikoro zvichawedzerwa mari nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana.
Chikoro cheHellen Macgie primary , chaiitia zviru zvina zvemadhora eRTGS kotoro yapera chavekuita zviuru zvipfumbamwe kotoro ino.
Vakuru vezvikoro vabatwa neStudio7 varamba kutaura vachiti havabvumidzwi nebazi redzidzo kutaura nevatori venhau.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo munyika, VaTaungana Ndoro, vanoti zvikoro hazvifaniri kudzinga vana sezvo uri mutemo wehurumende unoti vaite gadziro yekubhadhara mari muzvidimbu-zvidimbu.
Asi vamwe vabereki vakaita saVaHardlife Tangayi, vanoti zvikoro zviri kuramba murawo wehurumende wekuti vabhadhare mari zvishoma nezvishoma.
Vabereki vazhinji vari kuti zvikoro zviri kuvaudza kuti havakwanisi kudzidzisa vana vavo pasina mari yakakwana nekuti kunodiwa mari dzakakwanda dzimwe dzekutenga zvikwanisiro zvekudzvivirira kupararira kwe denda reCovid -19 zvakaita semamasiki nemasanitaiza.
Zvichakadaro, mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe VaObert Masaraure vanoti vamwe varairidzi vakasungwa nezuro vachiratidzira.Ko varairidzi ava vari kumiswa pamberi pedare riini? Tabvunza VaMasaraure.
Kunze kwekunetseka kwevabereki kubhadhara mari, vana mumadhorobha akawanda vasanganano nedambudziko guru rekushaya zvekufambisa sezvo mabhazi eZUPCO iri kunzi iite basa iri yoga ari mashoma zvikuru.